Shirkii uu ka qeyb galaayay guddoomiye Thabit oo ka furmay Magaalada Roma ee Dalka Talyaaniga “Sawirro” – Kismaayo24 News Agency
Shirkii uu ka qeyb galaayay guddoomiye Thabit oo ka furmay Magaalada Roma ee Dalka Talyaaniga “Sawirro”
by admin 15th November 2017 046
Caasimadda dalka Talyaaniga ee Rome waxaa si rasmi ah uga furmay shirka horumarinta iyo Maalgashiga magaallooyinka Africa iyo Talyaaniga
Shirkan waxaa Soomaaliya ku matelaya guddoomiyaha gobolka Benaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho mudane Taabit Cabdi Maxamed, shirka inta uu socdo waxaa lagu soo bandhigi doonaa horumarrada ay sameeyeen magaalooyinka Africa iyo sida ay muhiim ugu tahay in maalgashi lagu sameysto, kuwa soo koraya iyo magaallooyinka burbursan ee dib u dhiska u baahan xilligaan.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir waxaa shirka ku wehlinaya safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Talyaaniga C/raxmaan Sheekh Ciise, khudbaddii lagu furayey shirka waxaa jeediyey wasiirka Arrimaha Dibedda ee dowladda Talyaaniga oo sannadkaan marti-gelisay shirka.
Taabit ayaa yiri “ caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho iyo dadkeeduba marnaba kama joogsan doonaan tallaabooyinka ay ku xaqiijinayaan in caasimaddu hiigsato caasimadaha la mid ah, waxaa naga go’an inaan ku dedaalno sidii aan indhaha caalamka ugu soo jeedin lahayn Maalgelinta iyo ka qeyb-qaadashada dhismaha Muqdisho, si nolosha Muqdishaawiyiintu ay horey ugu socoto”.
Guddoomiyaha ayaa lagu wadaa in uu ka jeediyo khudbad ka hadleysa horumarka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo in ay u diyaar garowdey qaabilaadda Maalgashiga caalamka iyo arrimaha Dalxiiska.
Daawo Sawirro: Ra’isul wasaaraha Xukuumadda oo hadda gaaray Magaalada Baraawe Sidee ayaase loogu soo dhaweeyay?
Ra’isul wasaare kheyre “Baraawe waxay ahayd magaaladii aan ka dhoofay 1989kii, markii aan …..+Sawirro
AMISOM iyo Kenya oo iska fogeeyey Xasuuqa 131-ka qof ee rayidka ah ?
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo la kulmay Safiirka Turkey-ga U Fadhiya Soomaaliya (Sawirro)
Tifaftiraha K24 7th August 2016 7th August 2016
XOG; Qalbi dhagax oo Shacabka Somaliyed balan muhiim ah ka qaaday,lana hadlay RW Itoobiya